IREO KARAZAN’ARETINA SAMIHAFA SY NY FANASITRANANA AVY AMIN’I JESOSY
Amin’izao andro farany izao, dia ahitana aretina maro isan-karazany eto amin’izao tontolo izao. Izao anefa, arakaraky ny ahitana ny fitsaboana na ny fanafody maro samihafa, no ahitana ihany koa fa be dia be ny aretina vaovao na hafahafa izay tsy hitan’ny dokotera na ny fitsaboana moderna ny momba azy ireny. Aoka ho tsapantsika aloha fa mizara roa mazava tsara ny karazan’aretina: misy ny avy amin’ny lalanan’ny zava-boahary na ny natiiora, ny fahatongavan’izany. Ohatra, voan’ny tazo ny olona iray, satria nohanin’ny moka izay mitondra atodin-tazo. Ao koa ny aretina azo vokatry ny asan’ny devoly na ny asan’ny maizina, tahaka ny sakafo misy ody na poizina malagasy, iza miteraka ny aretina hafahafa atao hoe “voan-kanina”. Tsy afaka miala amin’izany isika ry havana malala, ary amin’ny maha-gazety ara-panahy ny NICE, dia hijery isika androany ireo karazan’aretina azo vokatry ny asan’ny maizina, sy ny fanafody na fanasitranana izany. Tsara ho marihina ihany koa anefa, fa afaka mitondra aretina ara-boajanahary fahita amin’ny andavandro ihany koa nty devoly, toy ny tazo, ny fanahy moana sy marenina, sns…
NY RAO-DIA SY NY FANDIKA
Tsy heno ny fidiran’ireo aretina roa ireo amin’izany, fa misoko mangina. Tsy maintsy miaraka, tahaka ny mpivady izy ireo, miakatra moramora izy
amin’izany, manaraka ny felan-tongotra, mahazo ny kitrokely, ny ranjo. Rehefa tonga eo amin’ny antsasaky ny ranjo izy, dia manomboka mamolivoly, na mangidihidy, mararirary manandrify ny rantsana. Rehefa tonga eo amin’ny lohalika izy, raha tiany, dia mijanona eo ary mitarika aretina sy fanaintainana ary fivontosana eo amin’izany faritra izany. Ny Rao-dia sy fandika dia fototra sy antony mahatonga ny aretin’ny lohalika eo amin’ny zokiolona, na ny antitra. Mivonto izy ireo, ary mitarika fanaintainana sy tsy fahafahana mandeha tsara, ka mahatonga ny olona voany handringa sy hijaly amin’ny fandehanana. Misy devoly manararaotra mitsofoka eo amin’ny lohalika, dia ny devolin’ny fahalemena sy ny devoly kilemaina, manampy ny devolin’ny rao-dia sy ny fandika. Ohatra iray amin’izany ny mamanay, izay efa 82 taona amin’izao fotoana izao, ary efa tany amin’ny dimy taona tany ho any no efa narary lohalika, nivonto, ary tena sahirana tamin’ny fandehanana. Vao iray volana mahery kely teo izay vao fantatra fa hay rao-dia sy fandika no nahazo azy. Rehefa fantatra izany dia natao avy hatrany ny asan’Andriamanitra sy ny fandroahana ireo karazana devoly ireo. Mila fantarina tsara ny aretina mahazo ny olona iray, sy ny devoly mamikitra amin’izany faritra izany, mba hahafahana mandroaka sy manapotika azy. Tiana ny manamarika fa ny devolin’ny Rao-dia sy ny fandika, dia faran’izay mora roahina sy resena, satria devoly saro-tahotra sy kely aina (devoly malemy sy mandringa), saingy manao mpamosavy malemy, misoko miadana, sy homa-miadana, ary tompon’andraikitry ny aretina homamiadana amin’ny faritra sasany amin’ny vatana.
Andalovany ny fe sy ny foto-pe, fa ny taova tiany hasiana kosa, dia ny tranon-jaza eo amin’ny vehivavy, ary ny prostate, ho an’ny lehilahy. Ireo devoly ireo no tompon’andraikitra ny aretina maro ao amin’ny tranon-jaza, toy ny fibrum, ny zaza antsoso-koditra, ny cancer na ny homamiadan’ny col sy ny tranon-jaza. Miara-miasa amin’ny devoly janga, ny devolin’ny fahafatesana ary ny devoly tsy tia zaza mena ny devolin’ny rao-dia amin’izany rehetra izany, manapotika sy mampahory ilay olona sy ny taova manodidina toy ny tranon-jaza, ny col, ny lalan-jaza. Betsaka ny fiantraikany ratsy amin’ny fandalovan’ireo miaramilan’I Satana ireo ao amin’ny tranon-jaza, toy ny fahamombana, ny fahafahan-jaza, ny fahafatesan’ny reny na ny zaza eo amin’ny fiterahana, ny aretin-dratsy vokatry ny firaisana ara-nofo, toy ny angatra…, ny zaza an-tsoso-koditra, ny tsiranoka fotsy avy any amin’ny fivaviana, ny korontana eo amin’ny
fadim-bolana, ny zavatra mibontsina marary sy mangidihidy any amin’ny fivaviana, ny fandehanan-dra na hemorragie. Ohatra iray amin’ny aretiana vokatry ny rao-dia, dia ilay vehivavy narary nandeha rà na hemorragie,nandritry ny roa ambin’ny folo taona, ka tsy sitran’ny mpitsabo sy ny fanafody, na dia nandaniana ny vola sy ny fananana rehetra aza: “Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary roa ambin'ny folo taona [Gr. narary nandeha rà] sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao mainka nihanarary kokoa aza; koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivohony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy: Na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko, dia ho sitrana aho.[Gr. voavonjy]
Tahaka izany ihany koa eo amin’ny lehilahy, manafika iany koa ny prostate ny devolin’ny Rao-dia sy ny fandika, ary miteraka aretina sy fahavoazana eo amin’izany taova izany: homa-miadana, fivontosana, fanaintainana eo anivon’izany taova izany. Mitarika fahamombana eo amin’ny lehilahy izany, fahalemen’ny taovam-pananahana, ary aretina maro eo amin’ny maha-lehilahy: angatra, fivontosana na hernie. Mitarika ihany koa ny hemorroide izy.
Tahaka izay niseho tery amin’ny lohalika ihany koa, raha tsy nisy ny asa fandroahana devoly natao, dia mijanona eo amin’ny tranon-jaza sy ny prostate manapotika ireo taova ireo, ireo devoly voalaza tery aloha, fa ny devolin’ny fandika sy ny rao-dia kosa dia manohy ny diany miakatra manafika ny nono eo amin’ny vehivavy, ary ny avokavoka eo amin’ny
1. RAVAOHELISOA 25/02/2020
[center][/center]Tompoko mila vavaka aho tiako hositrana ny vadiko , inona re tompoko no ataoko
Afaka mangataka mpanomponadriamanitra avy aminao ve Pasteur hametratanana ho anay